Budata BMW M3 Challenge maka Windows
Budata BMW M3 Challenge
Free Budata maka Windows (346.00 MB)
Budata BMW M3 Challenge,
Ihe ịma aka BMW M3, egwuregwu gọọmentị na nefu nke usoro BMW M3 ọhụrụ, na -enye nnwale ule na gburugburu mebere nke ọma. Ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụrụ na ị na -achọ inweta otu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala, ị nwere ike ịme egwuregwu a ma ọ bụ gosipụta ya.
Dị ka ị maara, BMW bụ akara ama ama maka ịdị mma ya na ụgbọ ala siri ike. Yabụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnụ ụtọ ịnya ụgbọ ala siri ike nke usoro M3 na ndụ nezie, ị kwesịrị ịnwale ihu ọma gị na egwuregwu a.
Agbanyeghị obere oge, ịma aka BMW M3, nke na -atọ ụtọ igwu egwu, so na egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu. Negwuregwu ahụ, nke nwere nhọrọ ịhazi ụgbọ ala gị, ị nwere ike gbanwee ma agba ụgbọ ala gị na agba rim. Yabụ, ọ ga -ekwe omume ịmepụta ụgbọ ala BMW nke gị chọrọ.
Ikwesighi inwe atụmanya dị elu site na eserese nke egwuregwu ahụ, nke ndị chọrọ iburu ụgbọ ala BMW ha maka ịnwale ule. Dịka m kwuru na mbụ nisiokwu a, egwuregwu a emeela agadi, mana ọ ka dị netiti egwuregwu ị nwere ike jiri obi ụtọ na -egwu. Ndị chọrọ ịnụ ụtọ ịnya ụgbọ ala nke BMW nwere ike ibudata ma lelee egwuregwu ahụ. Ị nwere ike ịhụ ụdị egwuregwu 4 dị iche iche na egwuregwu dị nokpuru. Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na kọmpụta niile nke oge a nwere ike ịgba ọsọ nke ukwuu, ọ bụrụ na kọmputa gị bụ PC ochie, ị nwere ike lelee ihe sistemụ chọrọ nokpuru ụdị egwuregwu.
Ụdị egwuregwu: 1. Ule mbanye2. Ọsọ megide oge3. Ọsọ ngwụcha izu 4. Ịgba ọsọ ọtụtụ mmadụ
Obere usoro chọrọ:
Intel Pentium IV nke 1.8GHz
512MB nke Ram
500MB oghere HD
Kaadị vidiyo 64MB
BMW M3 Challenge Ụdịdị
Nha faịlụ: 346.00 MB